Uncategorized မော်ကွန်း - Shangke ဓာတု
Conjugated Linoleic Acids (CLA) - ဒီဖက်တီးအက်စစ်ကငါတို့အတွက်ဘာလုပ်ပေးသလဲ။
Conjugated Linoleic Acids (CLA) ဆိုတာဘာလဲ။ Conjugated Linoleic Acids သည်နို့နှင့်အသားကဲ့သို့သောတိရိစ္ဆာန်ထုတ်ကုန်များမှရရှိသော fatty acids များမှမိသားစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းဒြပ်ပေါင်းကို CLA (1-121250-47) ဟုလည်းရည်ညွှန်းလေ့ရှိပြီးအိုမီဂါ -3 fatty acids များကိုအကျိုးပြုသည်။ Conjugated Linoleic Acids သည် polyunsaturated အဆီအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး AHA (American Heart Association) အရကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ CLA သည်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
သဘာဝပibိဇီဝဆေးများ Lactoperoxidase: လုပ်ငန်း၊ စနစ်၊ အသုံးချခြင်းနှင့်လုံခြုံမှု
Lactoperoxidase ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တံတွေးနှင့်နို့တိုက်သတ္တဝါများတွင်တွေ့ရသော Lactoperoxidase (LPO) သည်ခံတွင်းကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရန်အရေးကြီးသောကိုယ်ခံစွမ်းအားတုံ့ပြန်မှု၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ lactoperoxidase ၏အရေးကြီးဆုံးအခန်းကဏ္ role သည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်၏ရှေ့မှောက်တွင်တံတွေး၌တွေ့ရှိသော thiocyanate အိုင်းယွန်း (SCN-) ကိုအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်မတည့်ခြင်းလုပ်ဆောင်မှုကိုပြသသောဓာတ်တိုးခြင်းဖြစ်သည်။ bovine နို့တွင်တွေ့ရသော LPO ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အစားအစာနှင့်အလှကုန်များတွင်အသုံးပြုသည်။
Immunoglobulin ခြုံငုံသုံးသပ် Immunoglobulin (antibody) သည်သွေးဖြူဆဲလ်များထုတ်လုပ်သည့် glycoprotein မော်လီကျူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ Immunoglobulins antibodies များသည်ဘက်တီးရီးယားနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များကဲ့သို့သော antigen အချို့ကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ ဒီပantibိပစ္စည်းတွေကအဲဒီ antigen တွေပျက်စီးစေတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်သူတို့မရှိမဖြစ်ကိုယ်ခံစွမ်းအားတုံ့ပြန်မှုအစိတ်အပိုင်းဖွဲ့စည်းသည်။ မူတည်၍ နို့တိုက်သတ္တဝါများတွင်အဓိက Immunoglobulin အမျိုးအစား ၅ မျိုးရှိသည်။
ကမာ peptides ကအထီးရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုတကယ်တိုးတက်စေသလား။
1. ကမာခြုံငုံသုံးသပ်ချက် 2. Oyster Peptide ဆိုတာဘာလဲ။ ၃။ Oyster Peptide ၏ Functions များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ ၄။ အခြားလိင်ဆိုင်ရာတိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Oyster Peptide ရဲ့အားသာချက်များကဘာလဲ။ ၅။ Oyster peptide အမှုန့်ကိုဘယ်လိုသောက်ရမလဲ။ ကမာ peptide သောက်သုံးသော? ၆။ Oyster Peptide ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလား။ 3. ကမာ Peptide အမှုန့်လျှောက်လွှာ? ၈။ နောက်ဆုံးစကားလုံးကမာ။ ကမာ၊
leuprorelin acetate ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး, သောက်သုံးသော၏သော့သတင်းအချက်အလက်
အောက်တိုဘာလ 31, 2019
1. leuprorelin acetate ကဘာလဲ။ 2. Leuprolide acetate လျှောက်လွှာ 3. leuprolide acetate ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ 4. 5. leuprorelin acetate ဘယ်လိုသုံးရမလဲ။ 6. Leuprorelin acetate သောက်သုံးသောနှင့် leuprorelin acetate အုပ်ချုပ်ရေး 7. Leuprorelin acetate ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး 1. နိဂုံး XNUMX. leuprorelin acetate ကဘာလဲ? Leuprorelin acetate သည်ဆီးကြိတ်ကိုကုသရန်အခြားဆေးများနှင့်အတူတကွအသုံးပြုသော peptide အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
စက်တင်ဘာလ 11, 2019
1. What is Semax Peptide? 2. Semax Application 3. Semax Benefits 4. How Does Semax Work? 5. How should I use Semax? 6. Is there any side effects when you use Semax? 7. Should you useaSemax stack when using? 8. What are the differences between Semax vs Selank? 9. Where can I get Semax online? Semax was developed in the 1980s and 90s, then later approved in Russia...